China diamond ukusika blade, idayimane isaha blade, ceramic tile ukusika blade, zemabula ahlabayo blade, lenyengane ukusika blade, isaha blade ifektri abakhiqizi | Boda
Diamond ukusika blade, idayimane isaha blade, Ceramic tile tile ukusika blade, zemabula ahlabayo blade, lenyengane ukusika blade, isaha blade
I-diamond cutting blade uhlobo lwethuluzi lokusika, elisetshenziswa kakhulu ekucubunguleni izinto ezilukhuni neziqina ezinjengamatshe, ukhonkolo, isibhengezo se-precast, imigwaqo emisha nemidala, izitsha zobumba nokunye. Blade ahlabayo blade ngokuyinhloko yakhiwa izingxenye ezimbili: matrix kanye ikhanda umsiki.
I-matrix ingxenye eyinhloko yokusekelwa kwekhanda lokusika elihlanganisiwe, kuyilapho ikhanda lokusika liyingxenye yokusika enqubeni yokusetshenziswa. Ikhanda lokusika lizosetshenziswa ngokuqhubekayo lisetshenziswa, kanti i-matrix ngeke, Isizathu sokuthi ikhanda le-cutter lingasika ngoba liqukethe idayimane. IDayimane iyinto enzima kunazo zonke njengamanje, isika into esetshenzisiwe ngokungqubuzana ekhanda lokusika, kuthi izinhlayiya zedayimane zisongwe ekhanda lokusika ngensimbi.
Inqubo yokukhiqiza idayimane ukusika blade:
1.Sintered diamond ukusika blade: ihlukaniswe abandayo ngokucindezela sintering futhi hot ngokucindezela sintering.
2. Welding diamond cutting blade: kunezinhlobo ezimbili zokushisela: i-high-frequency welding ne-laser welding. Ukushisela okuvama kakhulu kuzodonsa ikhanda lomsiki kanye ne-substrate ndawonye ngokusebenzisa okushisa okuncibilikisiwe okushisayo, futhi i-laser welding izoncibilika onqenqemeni lokuxhumana lwekhanda lokusika kanye ne-substrate ngokusebenzisa izinga lokushisa eliphezulu le-laser ukwakha inhlanganisela ye-metallurgical.
3. Electroplated diamond cutting blade: impuphu yekhanda lokusika linamathele ku-substrate ngendlela ye-electroplating.
Ukusika ucezu ngezigaba:
1. Umkhawulo oqhubekayo we-saw blade: i-saw blade eqhubekayo ivame ukwenziwa ngendlela yokuncibilikisa. Isibopho seBronze sisetshenziswa kakhulu njengezinto eziyisisekelo ze-matrix. Amanzi kufanele engezwe ukuqinisekisa umphumela wokusika lapho usika, futhi uhlobo lwegebe lungasikwa nge-laser.
2. Uhlobo lwensimbi wokusika: Blade izinyo eliphukile, isivinini sokusika ngokushesha, esifanele izindlela zokusika ezomile nezimanzi.
3. Uhlobo lwe-Turbine blade cutting: kuhlanganiswe nezinzuzo zezinto ezimbili zokuqala, izinyo lesaha liqhubeka ngokuletha i-turbine efana ne-convex concave, ethuthukisa ijubane lokusika futhi yelula impilo yenkonzo.
Izinhlobo ezikhethiwe zamadayimane ama-saw blades zikhethelwa izinto ezahlukahlukene, futhi ukwakheka okuhlukile kwe-powder kufanelekile kuzici zezinto ezihlukile, ezinomthelela oqondile kwikhwalithi, umphumela, izinga lokuhlunga kanye nezindleko nezinzuzo zemikhiqizo ebonakalayo.
Izici ezithinta ukusebenza kahle nokuphila kwedayimane eliyindilinga eliyindilinga lisika imingcele yenqubo, usayizi wezinhlayiyana zedayimane, ukugxila, ubulukhuni besibopho, njll. Ngokuya ngamandla wokusika, kunejubane elihambisanayo lensimbi lesaha, ukusika ukugxilisa isivinini nokuphakelwa.
1.Ukulungele ukusika i-terrazzo marble.
2. Ukusika umgandayo kasimende, izinto eziyinkimbinkimbi zokukhombisa izinto ezingezona ezensimbi.
3. Ukuhlukaniswa komgwaqo, ibhuloho nomfula.
4. Ukuqoshwa komgwaqo ongaphezulu kanye nebhuloho.
5. Isetshenziswa kabanzi ekwakhiweni komasipala, ekwakhiweni kabusha kwemigwaqo, ekwakhiweni komgwaqo wesikhumulo sezindiza, egandayiwe kakhonkolo nakwezinye izindawo zokwakha, ikakhulukazi ezifanele ukusebenza kwe-asphalt nokhonkolo
Ngokwenzayo, ijubane eliqondile ledayimane eliyisiyingi eliyindilinga lilinganiselwe ngemibandela yemishini, ikhwalithi yensimbi yesarha nempahla yetshe elizosikwa. Ngokuya ngempilo enhle yokusebenza kanye nokusika ukusebenza kahle kwensimbi yesarha, ijubane eliqondile lensimbi lesaha kufanele likhethwe ngokuya ngezakhiwo zamatshe ahlukene. Lapho sawing granite, ijubane yomugqa saw isaha kungenziwa kukhethwe uhla 25m ~ 35m / s. Ukuze i-granite enokuqukethwe okuphezulu kwe-quartz futhi kunzima ukusika, umkhawulo ophansi wejubane lesaha ijubane elilinganayo ulungile. Ekukhiqizweni kwezitini zobuso begranite, ubukhulu bedayimane eliyisiyingi eliyindilinga lincane futhi ijubane elilinganayo lingafinyelela kuma-35m / s.
I-150 mm blade yokusika idayimane, i-180 mm diamond blade slot, i-350 mm diamond blade blade, i-400 mm blade blade blade blade, i-500 mm blade blade blade, i-600 mm diamond blade blade, i-700 mm wall blade blade, i-800 mm ukusika inqwaba yedayimane blade, 900 mm diamond saw blade, 1000 mm diamond saw blade, 1200 mm concrete saw blade.
Izinga lokuphakelayo yijubane lokuphakela kwetshe elizosikwa. Usayizi wayo uthinta izinga lokusaha, amandla asesandleni sesaha kanye nokushiswa kokushisa endaweni yokusaha. Inani laso kufanele likhethwe ngokuya kwetshe elizosikwa. Ngokuvamile, ukusika amatshe athambile, njengemabula, kungangezelelwa ngokufanele isivinini sokuphakelayo, uma isivinini sokuphakelayo siphansi kakhulu, sinikela kangcono ukuthuthukisa izinga lokusika. Uma isilinganiso sokuphansi siphansi kakhulu, umphetho wedayimane ungagaywa kalula. Kodwa-ke, lapho kusagwa i-granite enesakhiwo esimanzi okusanhlamvu nobulukhuni obungalingani, isivinini sokuphakelayo kufanele sincishiswe, ngaphandle kwalokho ukuzamazama kwensimbi yesaha kuzodala ukuhlukaniswa kwedayimane futhi kunciphise izinga lokusika. Ijubane lokuphakelayo le-sawing granite livame ukukhethwa ebangeni le-9m ~ 12m / min.
I-BOSENDA inikeza zonke izinhlobo zokusika i-disc / i-Diamond Saw Blade / i-Diamond Cutting Blade. Ikhanda libukhali futhi alikwazi ukumelana nokugqoka, impilo yalo yesevisi yinde kunaleyo yamadiski okusika emakethe jikelele. Sinikeza imininingwane ephelele yamadiski wokusika ahlukene, futhi imikhiqizo yethu ithengiswa kuwo wonke amazwekazi. Singaphinda senze ama-discs wokusika angajwayelekile ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
Ingxenye ye-BOSENDA yokusika ikhanda lediski eyenziwe nge-alloy enzima esezingeni eliphakeme eyenza ama-disc aqine kakhulu futhi yenze impilo isebenze.
Langaphambilini Isando sikagesi, isisel kagesi esalungiswa ngogesi, i-SDS, iMax, i-Hex, i-chisel ekhonjiwe, ishizolo eliyisicaba, umgodi omane kanye nesisi somgodi onamacala ayisihlanu, isisisi somoya
Olandelayo: Diamond ukugaya, itshe ukugaya, zemabula, lenyengane ukugaya, itshe ukugaya
Diamond ukugaya, itshe ukugaya, zemabula, grani ...
Woodworking isaha blade, aluminium isaha blade, carb ...
Ukugaya isondo blade, resin ahlabayo blade, ste ...